Dhamaadka Odaytooyada: Haweenka, Haweenaysiga iyo Haweentooyada! | Somaliland Post
Home Maqaallo Dhamaadka Odaytooyada: Haweenka, Haweenaysiga iyo Haweentooyada!
Dhamaadka Odaytooyada: Haweenka, Haweenaysiga iyo Haweentooyada!
Waayadan dambe, in badan waxa laga yaabaa in aad maqasho ereyada ay ka midka yihiin; “Women’s rights, feminism, patriarchy, misogyny, sexism, chauvinism” iyo dhigooda Af-Soomaliga ah. Waxaabad moodaa in dadkiiba waxa loo qaybshay laba qabiil oo waawayn. Qabiilka haweenaysiga (rag iyo
haweenba leh) oo jiritaankodu yahay soo dhicinta xuquuqda haweenka la duudsiiyay, kor u qaadida nolosha iyo kaalinta bulsho ee haweenka, iyo daafacaada haweenka. Waxaa qoladan hal ku dheg u ah “Sinaanta lab iyo dhediga”. Qabiilka kalena waa cidee? Waa inta soo hadhay, inta intaaba ka soo horjeeda. Inta aan ka soo horjeedin waa cidee? Labadii qarni ee ugu dambeeyay, waxaa is badal wayni ku yimi farsamadii wax soo saarka taasoo keensatay, is badal dhaqan dhaqaale oo saameeyay xidhiidhadii bulshada ee kala duwanaa iyo habkii bulshadu u abaabulnayd. Waa kacaankii warshadaha, shaqaale badan oo jaban ayaa loo baahday, taasina waxay dhalisay in haweenka oo marka horeba kartidooda la cadaadiyay fursad loo siiiyo inay hawlgalaan. May ahayn naxariis, waxay ahayd ka faa’idaysi.
Ma boosas baa lakala qaaday –la isu badalay– mise waa la wadaagay, sinaaday? Waaba intaa, meeday sinaantu? Dhanka qoyska markay noqoto, dhaqdhaqaaqa haweenaysigu wuxuu ku dadaalay in dumarku fursado kuwa ragga ah u helaan shaqada, guriga iyo barbaarintana labada qof ee qoyska wadaagtaa u sinaadaan. Waaba cadaalad mise ma aha? Si guud hadaad u fiiriso, waxaad is dhahaysaa
waa cadaalad iyo sinaan, laakin dhan kale hadaad ka eegto waxaad arkaysaa in haweenkii kud laga raray oo qanjo loo raray. Haweenka cadaadis baa lagu hayay, waxay ahayd in xuquuqdooda dadnimo la xaqiijiyo marka hore. Marka xigta xuquuqdooda qoysnimo la xaqiijiyo doorka ay ku leeyihiin. Marka xigtana, xuquuqdooda shaqo la xaqiijiyo. Qayb ahaan waa la xaqiijiyay oo kud waa laga soo raray, laakin hadana hadimo kale ayaa loo sii diray oo ah in dhinaca waajibaadka lala simo nin ay ahayd in uu ka waajib bato.